फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य! | Bharosha News
Home अर्थ फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य!
फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य!
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार सुनचाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतवार सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा रू.२०० बढेको हो। योसँगै आइतवार प्रतितोला फाइन गोल्डको मूल्य प्रतितोला रू. ९४ हजार ५०० र तेजाबी गोल्डको मूल्य रू. ९४ हजारमा कारोबार भइरहेको छ।
आइतवार चाँदीको मूल्य पनि रू.५ बढेको छ। चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू.१ हजार १८० मा कारोबार भइरहेको छ ।गत शुक्रवार चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू.१ हजार १७५ मा कारोबार भएको थियो।
Previous articleगण्डकी प्रदेशमा थप ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Next articleसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि
फेरी घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आज ?
काठमाडौं : नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि घटेको छ । आज सुन ४०० रुपैयाँले घटेको हो । विहिबार पनि ७०० रुपैयाँ...
आजबाट कुलमानको कार्यकाल सकियो
काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल आज सकिएको छ । उनले चार वर्ष पहिले भदौ उतान्तिस गते...
आजदेखि साझा यातायातका बस लामो दूरीमा चल्दै
काठमाण्डौ – साझा यातायातका बस आजदेखि लामो दूरीमा पनि गुड्ने भएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले अवरूद्ध भएको लामो...